Waa Sidee Xiriirka Ka Dhaxeeya Valverde & Pochettino? 12-Sano Ka Hor Maxaa Ku Dhexmaray Kooxda Espanyol. | Raadgoob
Arbacada waxaa garoonka Wembley ku wada ciyaari doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo Barcelona, waxaa la arki doonaa muddo kadib Ernesto Valverde & Mauricio Pochettino oo is gacan qaadi doona, balse ogow labadaan shaqsi inuusan ka dhaxeynin xiriir qurux badan.
Labada kooxood hadda waxey kala maamulaan laba ka mid ah kooxda darajada sare ee qaaradda yurub, inkastoo mar walba Barcelona ay ku jirto xoog-weynta dunida kubadda cagta, hadana Spurs sanadahaan dambe waxey muujisay iney ka mid tahay kooxaha darajada sare ee yurub.
Shaki kuma jiro iney kala maamulaan laba saf oo aan caadi aheyn lagana xusi karo Lionel Messi, Harry Kane, Luis Suarez, Christian Eriksen iyo Dele Alli.
Aan dib ugu laabano 12-sano ka hor maxaa dhexmara Valverde iyo Pochettino, halkey isku arkeen, maxaase dhexmaray labadaan shaqsi ee habeen dambe iska hor imaan doona.
Sanadkii 2006 waxaa maamulka Espanyol loo dhiibay Erensto Valverde balse wuxuu qaatay go’aan aad loola yaabay maadama uu kabtanimada kooxda ka xayuubiyay Pochettino sidoo kalana uu u sheegay maamulka inuusan gabi ahaanba u baahneyn.
Waa sheeko xaqiiqo ah Mauricio Pochettino ayaana ku qoray buugiisa “A New World”, wuxuuna qiray inuu qaatay Valverde go’aan uu isaga qudhiisa la yaabay.
“Valverde ayaa yimid Espanyol, wuxuuna go’aansaday inuusan i dooneyn sababtoo ah waxaan markaas ka mid ahaa dadka gacanta ku haya qolka labiska” ayuu Pochettino ku qoray buugiisa.
“Waxey noqotay arrin aad u adag inaan aqbalo, balse waan fahmay waqtiga”
Mauricio Pochettino wuxuu fahmay ulajeedka macalinka wuxuuna waqtigiisii tababaranimo ee Espanyol sidaas oo kale ku sameeyay Raul Tamudo.
Pochettino isagoo 34-jir ah ayuu go’aansaday inuu isaga fariisto kubada cagta, Espanyol ayaana aheyd kooxdii ugu dambeysay uu u ciyaaro, saddex sano kadibna wuxuu qabtay xilka tababaranimo ee kooxda Espanyol.